म्यादी जीवन बीमा किन अझै ओझेलमा ? – Insurance Khabar
म्यादी जीवन बीमा किन अझै ओझेलमा ?
प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १६:४७
नेपाली जीवन बीमा बजारमा परम्परागत बीमा योजना अर्थात् सावधिक वा अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमा योजनाले अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा उपचार सुविधा सहितको म्यादी बीमा वा बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा रकम उपलब्ध गराउने शर्तसहितको बीमा योजनाहरु सीमित बीमा कम्पनीमात्र ठूलो संख्यामा बिक्री गरेको पाइएको छ । तर समग्र जीवन बीमा व्यवसायमा अझै पनि यसको हिस्सा न्यून छ ।
आगामी आ.व.को लागी अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा बीमाको पहुँच हालको २४ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । म्यादी जीवन बीमालाई प्राथमकिताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यो लक्ष्य पुरा गर्न कुनै ठूलो चुनौती हुनेछैन ।
म्यादी जीवन बीमा योजना सीमित आम्दानी हुने वर्गको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपयोगी बीमा योजना हो । यो बीमामा बचत वा लगानी भन्दा पनि जोखिम बहनको पक्षलाई समेटिएको हुन्छ । एकजनाको आम्दानीले पुरै परिवारको जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो पारिवारिक संरचना भएको समाजमा त्यस्तो अभिभावकको अनुपस्थितिमा पनि परिवारलाई आर्थिक भरथेग गर्न म्यादी बीमा भरपर्दो आधार हुनसक्छ । उदाहरणको लागीः रु.१० लाखको १५ वर्षे सावधिक बीमा गर्नुपर्दा ४० वर्ष उमेरको व्यक्तिले कम्तीमा ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिकरुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर रु.१० लाखको म्यादी जीवन बीमाको लागी जम्मा रु. ३ हजार वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा संभव हुन्छ ।
सावधिक बीमा योजनाले अनिवार्य बचतको पक्षलाई जोड दिएको हुन्छ भने म्यादी जीवन बीमाले बीमितको जीवनको जोखिम बहनको पक्षलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । म्यादी जीवन बीमाको यही विशेषताको कारण आधुनिक युगमा जीवन बीमा भनेको सावधिक योजना भन्दा म्यादी योजनाको रूपमा बढी बुझिन थालेको छ ।
वित्तीय लगानी विशेषज्ञहरु पनि न्यूनतम लगानीबाट अधिकतम लाभको लागि म्यादी योजनाको छनोट गर्न सुझाव दिन्छन् । सावधिक योजनाको तुलनामा म्यादी जीवन बीमाले बहन गर्ने जोखिम अतुलनीय छ ।
म्यादी जीवन बीमाको चुनौतीः
म्यादी जीवन बीमाको लाभ सामान्यतया बीमितको मृत्युपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । अर्थात् बीमित स्वयम्को लागी भन्दा पनि आश्रितको लागी यसले काम गर्छ । आफ्नो अनुपस्थितिमा परिवारजनको बिचल्ली नहोओस् भनेर जिम्मेवार अभिभावकले पुरा गर्नुपर्ने दायीत्वमा म्यादी बीमा सहयोगी बनिदिन्छ । तर नेपाली बीमा बजारमा सावधिक बीमा यति धेरै हावी छ की बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक साधारण मान्छे म्यादी बीमा रोज्न तयार हुँदैन । अहिले म्यादी बीमा योजना बैंक, वित्तिय संस्था, लघुवित्तले कर्जाको सुरक्षाको लागी आफ्नो ग्राहकलाई अनिवार्य म्यादी बीमा गराएको पाइन्छ । यो बाहेक स्वेच्छाले म्यादी बीमा रोज्नेको संख्या न्यून छ ।
म्यादी जीवन बीमा योजनालाई व्यापकता प्रदान गर्नको लागी प्रारम्भिक चरणमा बाध्यात्मकरुपमै भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि यसबाट लाभान्वित हुने संख्या बढ्दै जाँदा बिस्तारै यसको स्वीकार्यता बढ्न सक्छ । तर यो ज्यादै लामो समय लाग्ने भएकोले सरकार, नियामक निकाय र बीमकहरुको सहकार्यबाट यसलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ ।
म्यादी जीवन बीमा किन रुचाउँदैनन् ?
आफू जीवितै रहे पैसा फिर्ता पाइन्न भन्ने थाहा पाएर म्यादी बीमा प्रति नाक खुम्च्याएका हुन् ? वा म्यादी जीवन बीमाले उनीहरुको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो ? वा म्यादी जीवन बीमाबारे सर्वसाधारणको बुझाई नै स्पष्ट हुन सकेको छैन? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सके म्यादी जीवन बीमालाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
यहाँ म्यादी जीवन बीमाको बारेमा केही व्याख्या गरिएको छः
म्यादी बीममा बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमितको परिवारजन वा ईच्छ्याइएको व्यक्तिलाई बीमाको शर्त बमोजिमको रकम भुक्तानी गरिन्छ । म्यादी जीवन बीमा योजनाले तोकिएको अवधिभित्र दुर्घटना वा कालगतीले बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा भुक्तानीको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । बीमालेखमा समावेश गरिस्एको शर्तहरुको आधारमा भुक्तानीमा बीमांक मात्र वा बीमांकको साथै अतिरिक्त लाभसमेत समावेश गरिएको हुनसक्छ ।
म्यादी जीवन बीमा सामान्यतया छोटो अवधिको अर्थात् १ बर्षको लागि जारी गरिन्छ । बीमा कम्पनीले बीमितको आवश्यक्ता र बजार मागलाई ध्यानमा राख्दै ५, १०, १५ वा २० वर्ष अवधिसम्मको म्यादी जीवन बीमा योजना पनि ल्याएका छन् । म्यादी बीमामा एकल भुक्तानी, सीमित भुक्तानी वा नियमित भुक्तानीको विकल्प दिइएको हुन्छ । एकल भुक्तानी अन्तर्गत बीमितले पुरै बीमा अवधिको बीमाशुल्क एकमुष्ठरुपमा बीमकलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । सीमित भुक्तानी अन्तर्गत बीमितले बीमा अवधिभित्र निश्चित समयावधि जस्तै २,३,४ वा ५ वर्षभित्रै विभिन्न किस्ताहरुमा सबै बीमाशुल्क भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । नियमित भुक्तानी अन्तर्गत बीमा अवधिभर बार्षिकरुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
म्यादी बीमामा एक पटक बीमा अवधि पुरा भएपछि पुनः बीमाशुल्क भुक्तानी गरी नवीकरण गर्न सकिन्छ । सावधिक बीमा योजना अन्तर्गत बीमा अवधिभर समान बीमाशुल्क किस्ताहरु भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर छोटो अवधिको लागी जारी गरिएको म्यादी बीमा योजनाको अवधि पुरा भएपछि बीमितको उमेरमा आएको परिवर्तनसँगै बीमा योजना नविकरण गर्दा बीमाशुल्क पनि थप हुँदै जान्छ ।
म्यादी जीवन बीमा योजनाले निम्न लाभहरू समावेश गर्दछः
क) बीमितको मृत्यु वा स्थायी अपांगताको अवस्थामा ग्यारेन्टी भुक्तान ।
ख) अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरेर अतिरिक्त सुविधा जस्तै दुर्घटना मृत्यु लाभ, अन्त्येष्टी खर्च वा घातक रोग उपचार सुविधा समावेश गर्न सकिन्छ
ग) सावधिक बीमा योजनामा झैं यसमा कुनै बचत सुविधा हुँदैन । तर केही
घ) बीमा योजनाहरुमा बीमाशुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ ।
ङ) म्यादी बीमामा सावधिक बीमामा जस्तो बोनश(लाभांश) प्रदान गरिदैंन ।
च) म्यादी बीमाको बीमाशुल्क बीमितको उमेर, स्वास्थ्य, अपेक्षित आयु र बीमांकको आधारम तय गरिन्छ । साथै बीमितले गर्ने कामको प्रकृति (संलग्न काममा आबद्ध जोखिमको मात्रा) को आधारमा तय गरिन्छ ।
म्यादी बीमा योजनाले कसरी काम गर्दछः
बीमकले बीमांक,बीमितको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र कामको जोखिमको आधारमा म्यादी बीमाकाो बीमाशुल्क निर्धारण गर्छ । बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमांक र अन्य अतिरिक्त सुविधावापतको रकम बीमकले मनोनित वा हकवालालाई हस्तान्तरण गर्छ । बीमितको कालगती वा दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएको हुनुपर्छ ।
आत्महत्या वा जानाजानी जोखिमपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहेको जस्तै मोटरसाइकल दौड,कार दौड, उचाईबाट हाम्फाल्ने, प्रतिबन्धित विस्फोटकको प्रयोग, आदिको कारण हुने निधनमा बीमकले दाबी अस्वीकृत गर्छ ।
यदि बीमितले म्यादी बीमामा अतिरिक्त सुविधाहरु(राइडर) समेत थप गरेको अवस्थामा बीमकले बीमितको ईच्छ्याइएको व्यक्ति वा हकवालाले यी सुविधाहरुवापतको थप रकम भुक्तानी प्राप्त गर्छन् ।
क) दुर्घटना मृत्यु लाभः कालगतीको कारण नभएर कुनै आकस्मिक दुर्घटनामा परेर बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमकले बीमांक बराबरको थप रकम उपलब्ध गराउँछ । अर्थात् रु.१० लाखको बीमा गरिएको छ भने दुर्घटना मृत्यु लाभको रु.१० लाख समेत ईच्छ्याइएको व्यक्तिले जम्मा रु.२० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्छ ।
ख) पूर्ण स्थायी अपांगताः दुर्घटनाको कारणले बीमित स्थायीरुपमा अपांग भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख भए अनुसारको क्षतिपूर्ती रकम बीमकले बीमितलाई नै उपलब्ध गराउँछ ।
ग) घातक रोग विरुद्धको सुरक्षा (सिआइ राइडर) सुविधा लिएको अवस्थामा बीमालेख संपुष्टीमा तोकिएको रोगहरुमध्ये कुनै एउटा रोगको उपचारको लागी बीमांक बराबर वा शर्त अनुसारको रकम बीमकले उपलब्ध गराउँछ ।
(लेखक एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको अधिकृत हुन् । यस लेखमा व्यक्त गरिएको विचार उनको व्यक्तिगत हो, उनी कार्यरत संस्थासँग यसले कुनै सरोकार राख्दैन)